Barium Sulphate, Iron Oxide, Iron Oxide - Fardaha Lammaanaha
Telefoon: +86 316 7106119
Taageero & Adeeg
Barium Sulphate, Lithopone, Calcium carbonate, Kaolin, Titanium dioxide iyo Iron Oxide
Caddaan sare lithopone BA311
Superfine kaalshiyam culus ...
1250 mesh superfine precipita ...
Ku saabsan sharaxaadda warshadda
Lammaanaha Langfang Fardaha Kiimikada Co., Ltd. waa mid ka mid ah saldhigyada wax soo saarka midabbada waaweyn ee ballaadhan ee Shiinaha ku yaal. Waxay ku taal magaalada Langfang ee “Beijing-Tianjin Corridor”, oo ku dhagan Jingjintang, oo leh gaadiid ku habboon. Shirkadan waxaa la aasaasay sanadkii 1997 waxayna ka mid tahay shirkadaha ka jira magaalada Langfang ee soo ogaan kara dhoofinta wax soo saarka kiimikada. Shirkadu waxay ku takhasustay soosaarka iyo iibinta barium sulfate, budada lithopone, kaolin, calcium calcium, anatase titanium dioxide, rutile titanium dioxide, iron oxide, shirkadu waxay leedahay awood farsamo oo xoogan iyo awoodaha soosaarka xoogan ee wax soo saarka ..
Guji si aad uhesho gacanta
Kooxda mashruuca cilmi baarista ee baahida macaamiisha kala duwan
Shirkaddu waxay soo bandhigtaa tiro badan oo tayo, waxay baareysaa mashaariic waxayna mas'uul ka tahay macaamiisha
Habka isbeddelka tikniyoolajiyadda cusub, cilmi baarista alaab tayo sare leh
kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaali karo daahannada, rinjiyeyaasha, caagagga, khafiifka, waraaqaha, cinjirka iyo beero kale, Soo saarna alaabo gaar ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Waxyaabaha sumadda u leh Fardaha Fardaha waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyay macaamiisha dal iyo dibadba.
222020 / Ogos
Ha dhayalsan titanium dioxide-ka ku jira dahaadhka
1. Doorka Titanium dioxide ee dahaarka Daahan waxaa badanaa ka kooban ...
Kala soocida Kaalshiyamka Cal ...
Kaalshiyamka Kaarboonatka waxaa loo qaybin karaa: Kaalshiyamka Kaarboon culus, kaalshiyam kaarboon fudud, kaalshiyam kaarboon firfircoon, kalluumsiinta dabka kaarboon kaalshiyamka Kaarboonate, kaalsiyamka kaarboonatka culus, iwm.
Isticmaalka budada kalsiyum
1. Kalsiyum budada loogu talagalay warshadaha caagga ah Kalsiyum budada ah ee caag-caag ah: (400 mesh, caddaan: 93%, kaalshiyam ka kooban: 96%). Kalsiyum budada waa mid ka mid ah buuxiyo ugu weyn ee loo isticmaalo warshadaha caag ah. Qadar aad u tiro badan oo kaalshiyam ah ayaa ka buuxan xoq ...
Lammaanaha Langfang Fardaha Kiimikada Co., Ltd.